Helena Tur. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Ọbara Ọjọọ | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 04/10/2021 12:00 | Emelitere ka 30/09/2021 15:46 | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede
Foto: site n'ikike Helena Tur.
A Helena Tur a makwaara ya dị ka Jane agadi, pseudonym nke ọ bịanyere aka na ya n'ọtụtụ aha akwụkwọ akụkọ romance setịpụrụ n'oge nke Ọchịchị Britain na narị afọ nke XNUMX, n'ihi na ọ nwere mmasị na akwụkwọ Bekee nke narị afọ ahụ. Onye Nkuzi, ugbu a ezumike ide, bịanye aka na mbụ na aha ya, Ọbara ọbara, wepụtara n'afọ gara aga. Ị dịwo mma inye m ajụjụ ọnụ a ebe ọ na -agwa anyị gbasara ya na ihe niile ntakịrị.
Helena Tur - Ajụjụ ọnụ
AKITKỌ AKITKỌ: Aha akwụkwọ akụkọ gị bụ Ọbara ọbara. Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
HELENA TUR:N'ezie aha bụ Ọbara adịghị mma, mana anyị kpebiri igwu egwu na -edoghị anya na mkpuchi. Ọ bụ a Akụkọ ihe mere eme edobere na Las Médulas na 1858. Mgbe a na -etinye ndị nche obodo na mpaghara ahụ iji gbochie mwakpo megide Isabel nke Abụọ, onye ga -agafe ebe ahụ n'oge adịghị anya. Ụmụ agbọghọ ndị ọbara gbapụrụ na -amalite ịpụta na El Sil. Nke ahụ dabara na mbata nke a nwa mgbei onye ga -agba mbọ lekọta nwa agbọghọ ntị chiri, ada onye nwe ugbo a beeụ. Mana, n'ọchịchọ ya ichebe ya, ọ ga -eji nke nta nke nta banye n'ọnụ anụ ọhịa wolf. Echiche mbụ, nke e wuru ihe ọ bụla ọzọ n'elu ya, bụ ihe kpatara mpụ ndị ahụ. Site n'ebe ahụ, na n'ime ndezigharị dị iche iche, mkpụrụedemede pụtara na ederede jikọtara ọnụ.
Htt: Mgbe m bụ nwata, nna nna m na -enye m akwụkwọ mgbe niile gbasara anụmanụ. Ha bụ ihe ọmụma, enweghị akụkọ. Echere m na akwụkwọ akụkọ mbụ m gụrụ bụ nchịkọta akụkọ dị mkpirikpi gụnyere Onye isi obi ụtọ, site n'aka Oscar Wilde, mụ na ya kwakwara ákwá ka ọwa.
Ihe mbụ m chetara ide bụ na afọ 9. Ọzọkwa, site na a akwụkwọ akụkọ, mgbe ahụ, m chịkọtara ha na Akọwara m ha site na ihunanya. Ihe iji lụsoo ike ọgwụgwụ dị ka naanị nwa, echere m.
Htt: M na -alaghachi azụ Nietzsche, Vicente Valero, Mallarme, Rilke, Kafka, Thomas nwoke, Jane Austen… Ana m achọ ịgụgharị ihe karịa ka m chọpụta.
Htt: Amaara m nke a: Onyebuchi henry, na Ihe osise nke Dorian Gray. Ọ na -atọ m ụtọ.
Htt: para dee, achọrọ mara na m nwere oge n'ihu. Enweghị m ike ide ihe n'oge adịghị mma, ọ siri ike itinye ederede gị nke na achọghị m ka ihe ọ bụla wepụ m.
Ịgụ ihe, ebe ọ bụla, enwere mkpọtụ, ndị mmadụ na -ekwu ma ọ bụ ihe ọ bụla. Akwụsịla m ụwa n'ụzọ dị mfe.
Htt: para dee, Ana m eme nke ọma maka ụtụtụ (Abụ m onye mbido n'oge) na, n'ezie, n'ọfịs m yana yana kọmputa ochie. Abụghị m onye ga -eburu laptọọpụ ebe ọ bụla. Maka lear, enweghị oge ọjọọ.
Htt: Ihe niile m nwere masịrị m mma, ụdịdị abụghị ihe ọzọ karịa akara. Mana, n'iji ha, enwere ihe abụọ m na-enweghị ike iso ha: enyemaka onwe onye na agụụ ịkwa iko.
Htt: Ugbu a, m na -agụgharị Red na Nwa, site na Stendhal, mana m kwụsịrị ya ka ọ gụọ Onye na -egbu egbu na -ekweghị ekwe, nke Carlos Bardem, n'ihi na m ga -eduzi okwu n'etiti ya na Domingo Villar.
N'otu oge ahụ, abụ m rna -ede akwụkwọ akụkọ Ágatha Christie, n'agbanyeghị na ngwakọta nke ụdị, etinyere na Villa de Ochandiano na 1897. Amatabeghị m etu a ga -esi kpọọ ya aha.
Htt: Ndị nkwusa, ewezuga, bụ ụlọ ọrụ na ha chọrọ ire ahịa na ha na -amanye ịchọ nguzozi n'etiti uru na mma. Ugbu a, ndị mgbasa ozi jupụtara na panorama ahụ na -enye nsonaazụ dị mma, mana, ọ dabara nke ọma, enwere ohere maka ndị bịara abịa (ịga n'ihu ga -adabere na ahịa, n'ezie).
Ana m ede ihe mgbe niile, mana Ekpebiri m ibipụta afọ ole na ole gara aga n'ihi na abụ m onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị na chọrọ ịgbapụ onye ahụ bịakwutere anyị. Ọ na -esiri gị ike ịhụ ka a na -akwali gị imeso ndị nwere ọgụgụ isi dị ka a ga -asị na ha bụ ndị nzuzu ruo mgbe ha ghọrọ ndị nzuzu. Ọ na -afụ ụfụ nke ukwuu.
Htt: Ejila m ọnọdụ a rịọ maka otu pụọ m na -ejikwa oge ede ihe. Enwere m ụlọ nke ukwuu na njide anaghị emetụta m nke ukwuu. Ma n'ezie Ọ naghị adị m ka m dee ihe ọ bụla gbasara ọrịa na -efe efe, Echere m na enweela ike ọgwụgwụ n'ozuzu maka enweghị usoro iwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Helena Tur. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Ọbara Ọjọọ